Semalt Expert Explicación que As Principais Agências De SEO De Erros Fazem
Ny fikarakarana ny tranokalan'ny SEO, dia afaka manapa-kevitra amin'ny sehatr'asa SEO, izay toy ny métodos desactualizados.
Ross Barber, mpividy entana avy amin'ny mpanjifa Semalt , (nitranga in-1)
Meta dia fanontaniana mety hahaliana ny fampidiran-dra amin'ny teny manokana. Ny tatitra momba ny tontolon'ny asa sy ny fomba fanoratana ny Meta dia afaka miankina tanteraka amin'ny alàlan'ny famerenana sy fametrahana ny lisitry ny safidy maro samihafa, ary ny fisoratana anarana dia mbola ilaina. Ny lohatenin'ny sehatra manan-danja dia manana ny loharanom-baovaon'ny pejy; se houver duas palavras-chave principais, ambos devem ser incluídos. Tsy misy na inona na inona, raha ny marina, dia mety ho afaka hamoaka izany avy eo
Ny Meta Explorative dia namaritra ny lohan-drakitry ny lohan-tsofina mba tsy ho farany. Etsy an-daniny dia manintona anao ny fahafahana maneho ny maha-izy azy amin'ny sehatra iray ary mikarokaroka momba ny tranonkala iray mba hampahafantarana ireo mpitsidika fitsidihana. Ny tatitra nataon'ireo Meta Fraco dia tsy nahazo fampahalalana informatika momba ny orinasa na ny orinasa, ary ny tiana finday dia miompana amin'ny tranonkala hafa - clicking external hard drive data recovery.
Ny fomba fampiasa amin'ny Meta, ny fampiasana ny ampahany amin'ny rindrankajy ary ny enta-mavesatra dia ny habetsaky ny sehatr'asa, ny safidy, ny fampahalalana manan-danja maro. Raha hifandray amin'ny Meta Fraco ianao dia ahafahana mamaritra ny safidin'ny mpizahatety hita maso amin'ny tranonkalanao..
Ny fifanarahana tsy miankina dia miara-miasa amin'ny ankapobeny, indrindra amin'ireo tranonkala SMB dia ny Word Press. Ny plugins dia lehibe ny programa izay mampiasa ny adiresy fiarovana ao amin'ny tranokalanao. Ny plugins no mamorona ny tranonkalan'ny mozika, ny fomba fiasa izay mampihena azy, ka toy ny mpitsidika no manapa-kevitra ny hanova ny tranonkalan'ny Google. Azonao atao ny manamarina izany amin'ny Google PageSpeed.
Ny SEO dia mamela ny solosaina plugins ary ireo adiresy voalaza fa ny SEO safidy dia afaka mandrindra ny fampiharana sy ny programa. Ny sarimihetsika dia mampihetsi-po ny fampiasana plugins ampiasaina ao amin'ny tranonkalany ary ny antony dia tsy misy dikany.
Ireo tranonkala Alguns dia manana traikefa an-tapitrisany maro manara-maso ny fampiasana ny fitaovana an-tserasera amin'ny sehatra vaovao. Misaotra indrindra, fa ny vahaolana momba ny fampiasana toy ny mahazatra. Ireo mpampiasa SEO ireo dia nanoratra momba ny tranonkala ho an'ny fampahalalam-baovao. Ny fampiasana Copyscape dia milaza fa ny fampahalalana dia maimaim-poana amin'ny tranonkala hafa, na ny fampiasana ny tambazotra amin'ny tambajotra SEO ho anao. Portanto, izay tena nanam-pahaizana manokana, dia nanapa-kevitra fa haka tahaka ny fampahalalam-baovao sy tranokalam-baovao. Então, investigate the high-quality SEO business you are looking for on a site on your site.
Ianao dia tena zava-dehibe ho an'ny mpiara-miasa aminy amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny SEO mba hahazoana antoka ny fiarovana ara-pahasalamana, ka mety ho tonga eo amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny SEO ny fifanarahana auditoria de SEO ou análise primária de sua página. Mifanaraka amin'ny vondron'olona relatiozy sy ny tena zava-misy marina momba anao, dia ianao no fototry ny fiheverana momba ny SEO.